Alperton parks and open space survey - Somali - Brent Council - Citizen Space
Cudurka faafa ee coronavirus wuxuu iftiimiyay sida jardiinooyinka iyo meelaha furan ay u yihiin muhiim nolol maalmeedka iyo caafimaadka jirka iyo maskaxda. Laga bilaabo la ciyaarista jimicsiga qoyska iyo asxaabta, socod lug ah illaa jimicsi, meelaha cagaaran oo tayo sare leh waxay sare u qaadaan tayada nolosha, caafimaadka iyo nabad qabka.
Waxaan rabnaa inaan ka maqalno dadka deegaanka degan jardiinooyinka soo socda iyo meelaha furan:
Garoonka Ciyaaraha Alperton (Alperton Sports Ground)
Meesha Furan ee Mount Pleasant
Meesha Furan ee Heather Park
Sahankani wuxuu ka caawin doonaa Maamulka Dagmada inuu fahmo heerarka qanacsanaanta ee jardiinooyinka maxalliga ah iyo meelaha furan, aqoonsashada caqabadaha iyo muujinta fursado kasta oo horumar lagu sameyn karo.
Natiijooyinka ka soo baxa sahanka ayaa loo isticmaali doonaa in lagu ogeysiiyo dalabyada maalgelinta mustaqbalka hagaajinta jardiinooyinka iyo meelaha furan.
Waad ku caawin kartaa adiga oo dhammaystiraya xogururintayada, ugu dambayn Jimcaha 12 Maarso 2021. Sahanku waa inuu qaataa oo keliya 5-10 daqiiqo in la dhammaystiro.
Xayiraadaha jira ee Covid-19 awgood, ma awoodno inaan soo bandhigno nuqulo adag oo ka mid ah sahankan. Haddii aadan ku dhammaystiri karin sahankan khadka tooska ah laakiin aad weli jeceshahay inaad na siiso aragtidaada, fadlan emayl ama soo wac adoo adeegsanaya faahfaahinta hoose, waxaanan kuu diyaarin doonnaa waqti ku habboon oo aan ku dhammaystirno ra'yi-baarista taleefanka.
Su'aalaha foomka ayaa la heli karaa iyadoo lagu buuxinayo Ingiriis, Gujarati, Soomaali, Hindi iyo Polish. Haddii aad u baahan tahay tarjumaad luqad kale ah si aad u buuxiso sahanka, fadlan la xiriir adigoo isticmaalaya faahfaahinta xiriirka hoose.